အသက်အရွယ် 17 - Nofap ငါ၏အစိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ကုသပေးခဲ့၏။ အခွားသောအကြိုးကြေးဇူးမြား - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အသက် ၁၇ နှစ် - နိုဖပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ
ငါဥရောပကနေမိပါတယ်။ ငါတစ်နေ့ 200 နှင့်ပိုပြီးဖို့လုပ်ငါ့တတိယပါအပေါ်ဖြစ်၏။ ငါအနှစ်အဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်ကျရောဂါကုသပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်, ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ nofap တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းငါ၏အမူးယစ်ဆေးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့“ မူးယစ်ဆေးဝါးများ” မရှိဘဲသေဆုံးနေခဲ့တာပါ။ ငါတကယ်က porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာသည်အထိ မဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
nofap ၏ 90 + ရက်ပေါင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
1 ။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု - ငါအရင်ကထက် Wayyyy ပိုပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်၏ ငါမိန်းကလေးတွေငါ့ကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ကြောက်ခဲ့သည် ယခုငါ alpha ဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာပြီးကျွန်ုပ်၏ gf သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်အတွက်ကံကောင်းသည်။ ယုံကြည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သူမသည်ကျွန်ုပ်အားသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလိမ်လည်လှည့်စားခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်းသူမကိုမထားခဲ့ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်နေပါသည်။
2 ။ မိန်းကလေးများထက်ပိုငါ့ကိုသတိပြုမိ- ငါသည်သူစိမ်းများနှင့်ဘာမျှမဆက်ဆံဘဲမျက်လုံးချင်းဆုံဖူးသော်လည်းယခုမူကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်ထွက်ပြေးသောအခါစကားပြောသောမိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ကြည့်ကြသည်။
3 ။ နည်း / NO စိတ်ကျရောဂါ- နောက်ဆုံးတော့ငါရောဂါပျောက်ကင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဖူးပေမဲ့အခုတော့ငါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာတောင်အချိန်မပေးတာတောင်ပျော်နေပုံရတယ်။
4 ။ self-ချစ်ခြင်းမေတ္တာ- ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ကြောင်းယခုနားလည်လာသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုမချစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာကောင်းသောလူနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုသည်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုနှစ်သက်ပြီးနေ့စဉ်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။
5 ။ ALPHA MALE စရိုက်များ- ဒါကငါ nofap စလုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ ငါဟာဘယ်လောက်သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်သေးဘူး၊ ညသန်းခေါင်ယံမှာတောထဲမှာတစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။
6 ။ ပိုများသောစွမ်းအင်- သင်သည်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအိပ်ရာပေါ်လဲလျောင်းပြီး s ** t လိုခံစားခဲ့ရသလား။ မရှိတော့ပါ။ ယခုငါတကယ်ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ ငါအားကစားရုံကိုသွားတယ်
7 ။ NO လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်- ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်တူသောမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာများကကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးရင်းနှီးဖော်ရွေသူဖြစ်သည်။ ငါကျပန်းသူစိမ်းတွေနဲ့စကားပြောတယ်။ ကျပန်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြောက်တယ်။ မိဘတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရတာကိုကြိုက်တယ်။
ဒါတွေဟာကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သတိပြုမိခဲ့သောအရေးအကြီးဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးခြောက်ခုဖြစ်သည်။ nofapers ကကျွန်တော့်ကိုခရီးဆက်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူတို့လိုအပ်တာအားလုံးကိုငါပြောပြမယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထက်အားကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၁ ရက်သို့မဟုတ် ၂၅၀ ရက်တွင်ရောက်နေပါကကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ မထွက်ပါနှင့်။
LINK - စိတ်ကျရောဂါနှင့်အကျိုးအမြတ်များအတွက် 90 + nofap ရောဂါပျောက်ကင်း
နောက်ဆုံးထွက် - 100 နေ့ရက်များ NoFap ငါ၏အလျှို့ဝှက်ချက်မဟာဗျူဟာ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ သင်သည်ထိုတိကျသောဘာသာရပ်အကြောင်းကိုငါ့အကိုအခြားချည်ရှာတွေ့ထက် 90 + ရက်ပေါင်း NoFap အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်။
ငါသည်ငါ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် NoFap ၏ 100 ရက်ပေါင်း ဒါကြောင့်ငါကဒီချည်နှင့်အတူလူတိုင်းကိုကူညီနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်။
NoFap ခက်ခဲကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်သင်မူကားကြီးတွေပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့မြင်ချင်လျှင်သင်သည်အဘယ်အရာကိုသင်ယဇ်ကိုပူဇော်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့ရှိသည်ထက် ကွ အဘယ်အရာကို yo အလိုတော် ဖြစ်လာသည်.
လေးနက်အရာ NoFap ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းဤနေရာတွင်အားလုံးယောက်ျားတွေနှစ်ခုအကြံပေးချက်များ:
porn blocker ၏ 1.Install အချို့သောမျိုး
ငါအရာအခြို့ရိုးရှင်းသောအသံသိကြပေမယ့်သူ့ရဲ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဒါယခုငါအသုံးဝင်သောတစ်ခုခုအတွက်အားလုံးအခမဲ့အချိန်ကိုအသုံးပျင်းကြောင့်ငါ masturbate လေ့ရှိတယ်။
စိုက်ထူခြင်းကကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေသည့်အချိန်များဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အရှုံးမပေးသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သတိထားမိသည်များမှာများသောအားဖြင့်ထိုစိုက်ထူမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏အခန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အခန်းမှထွက်လာပြီးမိဘများနှင့်အတူ room ည့်ခန်းသို့သွားခဲ့သည်။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ယံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ထူမှုများဖြစ်ပေါ်သောအခါကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိစေမည့် youtube ဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တီးခတ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ် vs စိတ်ထဲ
ငါသည်ငါ့စိတ်ထဲငါ့ကိုထိန်းချုပ်ယူဖို့ကြိုးစားနေနဲ့တူကြောင်းကိုမြင်သောအခါငါကစစ်တိုက်ခြင်းငှါငါ့အကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငါတောင်အစဦး၌အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကိုယူပေမယ့်ယခုငါ it.You အတှေးမြိုးစစ်တိုက်ခြင်းငှါခိုင်ခံ့ willpower ရှိသည်ရှိသည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်အမှန်တကယ်သင်အမှန်တကယ်ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်မြင်လိမ့်မည်။
ငါဟာညစ်ပတ်တဲ့အကြံအစည်တွေအတွက်တကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကိုတွန်းလှန်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကမင်းအနိုင်ရလို့ရနိုင်မယ့်ရန်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့အဲဒါဟာခက်ခဲတဲ့ရန်သူဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကပိုအားကောင်းတယ်။
ငါဟာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးအိမ်ပြန်ပြီးသူမကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင် NoFap ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါမှာတော့ငါဟာငါ့ရဲ့အတွေးတွေထက်ပိုပြီးအားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲသက်သေပြခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလမ်းပေါ်ကမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူတွေကိုအထူးဘာမှမရှိဘူးလို့မြင်လို့ပါ သူတို့ကိုငါအရင်ကကဲ့သို့အောက်ခံပေါ်တွင်မတင်ပါနှင့်)
ငါအရင်လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပြောခဲ့သကဲ့သို့အစပျိုးခြင်းသည်မင်းမတိုက်ချင်သောရန်သူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အောင်မြင်နိုင်သည်။ အစပျိုးသင့်ရဲ့ဖြစ်ကြသည် အဆိုးဆုံး ရန်သူဒါကြောင့်သင်စောင့်ကြည့်ချင်သောအရာကိုအလွန်သတိထားပါ။ သငျသညျခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါသင်ရန်ရှိသည်ထက်သင် porn မကြည့်ချင်ကြဘူး သတိရပါ မကောင်းတဲ့ကြိမ်လာသောအခါဆုံးဖြတ်ချက်။ သင်သည်သင်၏နိမ့်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အခါ, သငျသညျ TOP ပေါ်မှာအခါသင်ခံစားခဲ့ရပုံကိုသတိရပါ။ ငါ၏အလျှို့ဝှက်ချက်မဟာဗျူဟာ Hacking ကို။
ဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုပြီးချည်, လှုံ့ဆျောမှုအဘို့အကြှနျုပျကိုလိုကျနာပါ
နောက်ဆုံးအဆင့် ၁ - NoFap - Shad0W လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မည်သို့နေရမည်နည်း
Heyy လူတိုင်း။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာချည်လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေငါ့ချည်တွေဘယ်လောက်ကြိုက်ခဲ့သလဲ၊ ငါမှုတ်သွင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါအံ့သြမိတယ် ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်ထံအပ်နှံသည် စစ်သား .
သင် NoFap တွင်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်သင် NoFap စတင်နေပြီဆိုလျှင်၎င်းမှောင်မိုက်သောအခြမ်းရှိသည်။ ထိုအမှောင်ထုသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သေစေနိုင်သည်။ သို့သော်မှောင်မိုက်ဘက်ငါပြီးနောက် ကတိပွု မင်း… ကောငျးကငျ သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်။
အဲ့ဒီအမှောင်ဘက်ကငါခေါ်တာပါယခုအဘယ်အရာကိုအဆင့်? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်မယ့်အချိန်ရှိမယ်။ ငါဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲ။ ဒီကင်လုပ်ခိုင်းကဘာလဲ? ငါ့ရဲ့သူရဲတွေကိုယုံပါ။ ငါခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒါထောင်ချောက်တစ်ခုပါ ဒါပေမယ့်မင်းကိုတစ်ခုခုပြောခွင့်ပြုပါ။ ဒီနည်းကိုဒီအတိုင်းလုပ်နိုင်ရင် .. ဒီနည်းကိုဒီနည်းကနေလှုပ်ပြီး !!! .. သငျသညျအနိုင်ရရှိပါသည်.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ရပ်တန့် .. သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြရပ်တန့် သင် အထူးဖြစ်ကြသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းသင်ပင်သူနှင့်အတူစကားပြောမတိုင်မီမိန်းကလေးတစ်ဦးလမ်း fucking စဉ်းစားရန်, porn စောင့်ကြည့်ဖို့, masturbate ရန်သင့်အားပြောပြနေသည်။သင်ချင်တာလဲ !?!? သင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လောက်မိုက်မဲနားလည်သဘောပေါက်သလား !?
ဘဝတစ်ချိန်ချိန် .. မင်းမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့အရာ၊ ပိုကောင်းတဲ့နေရာ၊ အခြားတစ်ဖက်မှာပိုကောင်းတဲ့ဘဝ ... ငါသာနက်ရှိုင်းတယ်၊ ငါပြောပြမယ် .. အမေရိကန်ကိုလာဖို့ငါခေါ်မယ်။ မင်းဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာဘဝလွတ်လပ်မှုခံစားရလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏လမ်းဖွင့်တူးရန်ရှိသည် .. သင့်အနေဖြင့်ထိပ်ရဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသော fuck ဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ငါအမှအိပ်ဤအရပ်၌မရှိဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ်သင်သည်အဘယ်သို့သိနိုင်?!?
ငါသိလျှင်, ဒီနည်းကို Shit အလုပ်လုပ် .. ငါဒီနည်းကို Shit ထဲ၌ယုံကြည်လျှင် .. ငါလုပ်နေတာ! ငါဒီလမ်းခရီးဘယ်မှာငါစတင်ခဲ့ဘယ်မှာငါရေကျလိမ့်မယ်ငါငိုကြွေးပါလိမ့်မယ်, ငါပင်နက်ရှိုင်းသောကျလိမ့်မည် ဒါပေမယ့် dude ... ငါမသွားဘူး အရှုံးပေးသည်! .
I ယုံကြည် အကျိုးကိုလည်းမရှိ။ ငါပြီးသားနေပါစေသင်သွားချင်ပုံကိုဝေး .. ကိုသင်နေဆဲအကျိုးကိုပြီးနောက်ဆုလာဘ်ရလိမ့်မယ်, ဒီမှာအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းရှိသည်။ သင်ရုံယုံကြည်ဖို့ဖူး !!
ရုံနဲ့တူ ကိုယ်မင်းကိုယုံတယ်။ UP ပေးမထားပါနဲ့။ ငါခက်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ အကယ်၍ ခက်မယ်ဆိုရင်သင်နီးပြီဆိုတာကိုဆိုလိုသည်။ UP ပေးမထားပါနဲ့! ငါ့ကိုမင်းရဲ့မြည်းတွေကိုမနင်းပါစေနဲ့။ အခြားဘက်ခြမ်းမှာဘာတွေမြင်နေလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါလိုခငျြသငျသညျငါ့ဘက်မှာဖြစ်ချင်တယ် သင် ငါ့ကို join ဖို့။ WE တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ။ ကြှနျုပျတို့မှာ စစ်သား. ကျနော်တို့ UP ပေးမထားဘူး .. WE အကြောင်းပြချက်မပေးပါဘူး။ ကျနော်တို့မြင်နိုင်မနိုင်တောင်မှကျနော်တို့ယုံကြည်။
ဒီတော့အခုငါမေးမယ် ... မင်းကမင်းလား စစ်သား သို့မဟုတ်တစ် သတ္တုတွင်းအလုပ်သမား, မိုင်းဗုံးချထားသူ ကြောင်းပဲပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးသလဲ?
နောက်ဆုံးထွက် - နောက်ကျောသူသည်ခန့်မှန်း?! 1 တစ်နှစ်တာ NoFap (လှုံ့ဆော်)
ဟလို ငါ၏အနညျးငယျ စစ်သား။ ငါသည်သင်တို့ယောက်ျားတွေနှင့်အတူပြန်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်၏။
ငါ့ကိုမသိသောသူတို့အဘို့။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤ site ပေါ်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးရိုးရိုးသားသားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါအများကြီးကျိန်ဆို fuck ဆိုတဲ့သတိပေးခဲ့သည်!
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ ။ ငါဂုဏ်နကြီးကျယ် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကယ့်ကိုဘယ်လောက်သင်ယောက်ျားတွေပြောပြနေပါတယ်။ ဒါကလည်းငါပြန်ငါ၏အဖို့ဖြစ်၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် စစ်သည်များ။ ငါသည်သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူအခြားခရီးကိုစတင်ပြန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်၏။
သင် NoFap ခရီးတွင်အောင်မြင်လိုပါကစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့ရပေမယ့်အရမ်းခက်နေတယ်။ ငါတစ်နှစ်တစ်နှစ်သွားပြီးတစ်ခုခုပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်သောအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အောင်မြင်မှုကိုအံ့အားသင့်မိသော်လည်းတစ်နှစ်နှင့်လအနည်းငယ်အကြာတွင် ... ငါ porn ကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံး fuck ဆိုတဲ့ "နှင့်အတူစတင်ကိုယ့်ကိုအနည်းငယ် peek"ဒါကတကယ်ငါ့ကိုတက် fucked ။ ငါတစ်ခါတုန်းကငါ့ရည်းစားနှင့်အတူရှိ၏သူမငါ့ကို handjob ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါကျိန်ဆို, porn ငါ့ကိုအမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကြောင့်သင်သင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို ရပ် တစ်ခုခုလုပ်နေတာ။ porn တကယ်သင့်ရဲ့ eractions အကျိုးသက်ရောက်စေမ .. သင့်ကိုဖြစ်ပျက်စေနိုင်အောင် !!
ဒီတစ်ခါလည်းဟုသူကဒီမှာတစ်စုံတစ်ဦးကို .. ကောင်းကောင်းလည်းမရှိ MR.Shadow ငါ .. ကောင်မလေးတောင်တောင်မရှိဘူး .. ဘာကိုမှန်းလဲ NoFap ရည်းစားရဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ် ငါဒီ shit အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာကိုခန့်မှန်းမယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့်ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ် .. ငါဒီမှာရပ်နေတယ်။ မင်းကိုလာဖို့ငါ့လက်ကိုပေးတယ်။တစ်ဖန်ဒီခရီး၌ငါ့ကို oin!
NoFap မတိုင်ခင်ကမိန်းကလေးတွေနဲ့တောင်စကားတောင်မပြောနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကငါ့ကိုစွမ်းအင်တွေအများကြီးနဲ့နေ့တိုင်းပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့လှုံ့ဆော်မှုများစွာပေးခဲ့တယ်။ နိုး အတွင်းစိတ် alpha သောသင်၏အတွင်းပိုင်းပိတ်မိနေသည်။
သင်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ရှုလျှင်၊ သင်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၌မှတ်ပုံတင်ထားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏အစ်ကို၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန် ၉၀% ပြီးပြီဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဒါမှမဟုတ် ၁၂၀ ရက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ fuck ဆိုတဲ့မပေးဘူး။ မင်းအကြိမ်တစ်ရာမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ငါအရှုံးမပေးပါဘူး။ ဤအချိန်သည်သင်မဟုတ်ပါ! အဘယ်ကြောင့် ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရှုံးနိမ့်တိုင်းမင်းအမှားကိုသင်လေ့လာမိလို့ပဲ။ ငါ့အမှားက porn ကိုကြည့်နေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် porn ကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ပါကသင်သည်ပုံမှန်ထက် ၁၀ ဆပိုကြာမည်ဟုသင်အာမခံပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့အားသင့်ပါလိမ့်မယ်။
ငါ၌လမ်းညွှန်ရန်တစ်စုံတစ် ဦး မျှမရှိခဲ့သော်လည်းယခုတွင်ငါသည်သင်တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
သငျသညျ porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲသို့မဟုတ် masturbating မပါဘဲတနေ့သွားကြဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင်, သင်ပြီးသားဂုဏ်ယူဖြစ်ဖို့တစ်ခုခုရှိ ။ ငါအစဉ်အမြဲအသုံးပြုလေ့ကဲ့သို့သင်၏ပြဿနာများနားထောင်ဖို့ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို, သငျသညျလမ်းပြဤနေရာတွင်ဖြစ်၏။ မင်းတို့က porn မလိုအပ်ဘူး၊ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုပါဘူး။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဟာကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး၊ ဒါကသင်မဟုတ်ဘူး။ သင်ထက်သာ။ ကောင်း၏!
ချစ်ရသော စစ်သား .. ဒီရုံအချုပ်အခြာဖြစ်၏။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏ 100th နေ့၌ဖြစ်ကြောင်း, သင့်ပဌမနေ့၌ရှိပါတယ် .. ကျနော်တို့သူရဲကောင်းတွေနေကြတယ်၊ ရပ်တန့်မသွားဘူး၊
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှာငါလူရာပေါင်းများစွာကကူညီပေးခဲ့ကြိုက်တယ်ကူညီပေးပါမည်, ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျ၌ငါ့ကိုဆက်သွယ်မကြောက်ပါနှင့်။ သငျသညျကိုငါမကိစ္စကိုသင်ကြာရှည်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဂုဏ်ယူမိပါတယ်, ငါ့ Warrior ဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်သင်တို့လည်းဂုဏ်ယူဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ဘို့သင့်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်!